Tababare Solskjær oo goolkii uu xalay dhaliyay Marcus Rashford la bar-bardhigay Cristiano Ronaldo – Gool FM
(Manchester) 31 Okt 2019. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay qaab ciyaareedka ay Red Devils sameysay saddex kulan oo ay ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda.
Hadalka kasoo yeeray tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa wuxuu imaanayaa kaddib guushii ay xalay kaga soo gaareen kooxda reer London ee Chelsea garoonka Stamford Bridge.
Tababare Solskjær ayaa ciyaarta kaddib wuxuu la hadlay warbaahinta wuxuuna sheegay:
“Goolkii laadka xurta ahaa uu dhaliyay Marcus Rashford, wuxuu u shabahaa sida Cristiano Ronaldo oo kale”.
“Marcus Rashford waa ciyaaryahan aad u fiican, wuxuu had iyo jeer dhaliyaa goolal cajiib ah, wuxuu u shaqeeyaa si adag maantana wuxuu helay abaal-marintiisa”.
“Rashford wuxuu leeyahay maskax iyo shaqsiyad aad u weyn, waxaan u sheegay kahor ciyaarta, hadii aan helno rigoore, addiga ayaa ah shaqsiga tuuri doono, kaliya waa inaad ka fekertaa halka aad dhigeyso kubadda kaddibna u tuur sida aad doonto”.
“Inaad badiso saddex kulan xiriir ee banaanka ah, kaddib kulamadii caalamiga ahaa, kaddib in muddo ah oo aan sidaas sameynin, ugu yaraan waxay naga soo afjareysaa hadalada ku aadan inaan wax guul ku gaarin meel ka baxsan garoonkeena, wiilasha si adag ayeey u shaqeynayeen”.
Koulibaly oo tilmaamay xiddiga uu u arko inuu u qalmo ku guuleysiga abaal-marinta Ballon d'Or 2019